1. ပခုံးလှုပ်ရှားလိုက်တိုင်းမှာ နာကျင်မှုကို ခံစားရပြီး အထက်ကောင်းစွာ မမြှောက်နိုင်၊ စက်၀ိုင်းလို လှည့်၍မရနိုင် စသည်ဖြင့် ပခုံးရဲ့လှုပ်ရှားမှုတွေ အကန့်အသတ် ဖြစ်လာတဲ့ Freezing Stage
2. ပခုံးလှုပ်ရှားမှုနည်းသူများ (ခွဲစိတ်ထားသူများ၊ လက်ကျိုးထားသူများ၊ လေဖြတ်ထားသူများ၊ ပခုံးဒဏ်ရာ ရထားသူများ)
ရောဂါရာဇ၀င်ကို မေးမြန်းခြင်း၊ ပခုံးရဲ့လှုပ်ရှားနိုင်စွမ်းကို စမ်းသပ်စစ်ဆေးခြင်းဖြင့် Frozen Shoulder ဟုတ်၊ မဟုတ် သိနိုင်ပါတယ်။ စစ်ဆေးမှုအနေဖြင့် ဓာတ်မှန်ရိုက်ခြင်း (သို့) MRI ရိုက်ခြင်းတို့ ပြုလုပ်နိုင်ပါတယ်။
• ကုသမှုအနေဖြင့် နာကျင်ကိုက်ခဲမှု သက်သာစေတဲ့ ဆေးဝါးများပေးခြင်း (အက်စပရင် - Aspirin, အိုင်ဗျူပရိုဗန် - Ibuprofen)
• Physical Therapy ဟုခေါ်သော ပခုံးလေ့ကျင့်ခန်းများ ပြုလုပ်ခြင်း
အေးခဲပခုံးေ၀ဒနာဟာ 1 နှစ်မှ 1 နှစ်ခွဲအတွင်း ရောဂါလက္ခဏာ မသက်သာပါက -
ပခုံးထိခိုက်ဒဏ်ရာရခြင်းကြောင့်ဖြစ်စေ၊ လေဖြတ်ထားခြင်းကြောင့်ဖြစ်ဖြစ် ပခုံးအသုံးပြုမှု မရှိခြင်းသည် Frozen Shoulder ဖြစ်ရခြင်း အကြောင်းအရင်းတွေထဲမှာ တစ်ခုအပါအ၀င်ဖြစ်တာကြောင့် အဲ့ဒီအချိန်တွေမှာ ဆရာ၀န်နှင့် တိုင်ပင်ပြီး ပခုံးနှင့် ပတ်သက်တဲ့လေ့ကျင့်ခန်းတွေ ပြုလုပ်သင့်ပါတယ်။